Multifunction emagetsi metres Vagadziri - China Multifunction emagetsi metres Suppliers, Fekitori
Matatu-chikamu mana-waya / matatu-chikamu matatu-waya magetsi emagetsi idunhu rakakura-rakasanganiswa, ichishandisa dijimendi sampling yekugadziridza tekinoroji neSMT maitiro, akagadzirwa uye akagadzirwa zvinoenderana nemagetsi chaiwo ekushandisa vashandisi vemaindasitiri. Izvo zvinosangana nezvinodiwa zve GB / T 17215.301-2007 ， DL / T 614-2007 uye DL / T645-2007 .Zvinodikanwa zvinogona kugadziriswa zvinoenderana nezvinodiwa zvebasa.
Imwe-chikamu chakawanda-chekuita magetsi magetsi emamita chinhu chitsva chesimba rekuyera simba rakagadziriswa uye rakagadzirwa nekambani yedu zvinoenderana nehunyanzvi hwenyaya dze GB / T17215.321-2008. Ichi chigadzirwa chinoshandisa hombe-dzakabatanidzwa macircuit uye maSMT maitiro, ane mabasa akadai magetsi emagetsi kuyera, kugadzirisa dhata, chaiyo-nguva yekutarisa, uye ruzivo rwekudyidzana.
Iyo yega-chikamu chinoshanda simba mita inoshandisa murazvo-unodzoreredza isiri-simbi dzimba, iri diki muhukuru uye nyore kuisa, ine RS485 yekukurukurirana interface, ine inoshanda uye inoshanda simba rekuyera simba basa, inogona kuyera parameter senge voltage, ikozvino, simba, simba chinhu uye zvichingodaro.